विद्यार्थीका लागि गणित विषय बोझ हो कि आवश्यक ज्ञान ? – Everest Dainik – News from Nepal
विद्यार्थीका लागि गणित विषय बोझ हो कि आवश्यक ज्ञान ?
तर शिक्षा मन्त्रालयले लामो छलफलपछि तयार गरिएको नयाँ पाठ्यक्रममा गणितलाई अनिवार्य नभइ वैकल्पिक विषय बनाइएको र त्यसबाट झन्डै ३ लाख विद्यार्थीहरू माथिको अनावश्यक बोझ हट्ने बताएको छ ।
आधुनिक शिक्षामा गणित विज्ञान जुनसुकै क्षेत्रमा आवश्यक हुने भन्दै उनीहरूले विना अध्ययन गणित हटाइँदा विद्यार्थीको शैक्षिक जीवन प्रभावित हुने तर्क गरेका छन् ।
त्रिवि गणित केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा. केदारनाथ उप्रेतीले भने, ‘गणित विषय नपढेकाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अरू पनि निजी विश्वविद्यालयहरूमा कैयौं क्षेत्रमा अण्डर ग्राजुएट लेभलमा भर्ना नै हुन पाउँदैनन् । चाहे त्यो बी ए, बी एस्सी, बीबीए वा इन्जिनियरिङ विषय हुन् । त्यसले उनीहरूलाई असर पर्छ।’
उनले भने, ‘अहिलेसम्मको अध्ययनले ११ र १२ कक्षा उत्तीर्ण भइ विश्वविद्यालय जानेहरूको संख्या साढे ३ लाखको हाराहारीमा रहेको देखाएको छ । त्यसमा साइन्स पढ्नेको संख्या ३० देखि ५० हजार जति छन् । त्यसैले ५० हजार सम्मलाई मात्र चाहिने विषय अरु ३ लाखलाई पनि नथोपरौं भनेर मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो ।’
उनले गणित विषयलाई ऐच्छिक बनाउने र त्यसको स्थानमा सबै संकायका विद्यार्थीको लागि आवश्यक जीवन उपयोगी शिक्षा विषय थपिएको पनि बताए।
नयाँ पाठ्यक्रम आगामी वर्षबाट लागू हुनेछ। बीबीसीबाट